Lawula indawo yakho kwihard drive ngendlela eyahlukileyo ngePulvinus | Ndisuka mac
Lawula indawo yakho kwihard drive ngendlela eyahlukileyo ngePulvinus
Ngokuhamba kwexesha, i-hard drive yethu iqala ukugcwalisa ngeefayile zazo zonke iintlobo, nokuba ziividiyo, iifoto, amaxwebhu, usetyenziso ... ukuba iifayile sinamaqela ngale ndlela) ukujonga ukuba indawo ekuhlalwa kuyo inokuba yimfuneko komnye umsebenzi. Kungumsebenzi odinisayo onokusenza ukuba sizincame iinjongo zethu ekuqaleni. Ngethamsanqa kwiVenkile ye-Mac App sinokufumana usetyenziso sivumele ukujonga ngokujonga nje indawo ehlala iifayile nganye yeefolda ebesizikhethile ngaphambili.
UPulvinus yenye yazo, isicelo esifumaneka simahla simahla, ubuncinci ngexesha lokuprinta eli nqaku. Ixabiso laso eliqhelekileyo li-1,99 euro. Njengoko ubona kumfanekiso ongentla, uPulvinus usinika ulwazi malunga neefayile ezigciniweyo, ezihlelwe ngombala kwibhokisi elungileyo. Kodwa uPulvinus akasivumeli nje kuphela ukuba sijonge umxholo esiwugcinileyo kwi-hard drive yethu, kodwa kananjalo Ukongeza, ikwasivumela ukuba sicime umxholo ogcinwe kwi-Mac yethu.
Isicelo sinendlela yokwenza ikhowudi eyenziwe ngokwezifiso kuhlobo ngalunye lwefayile, nokuba yividiyo, iaudiyo, amaxwebhu okanye usetyenziso, ukwenza kube lula ukuzibona. Ngale ndlela, ukuba sifuna ukucima iifayile zesicelo, ezimelwe ngokomzekelo kuluhlaza, kufuneka sizikhethe kwaye ucofe kwiqhosha lokucima okanye uzitsale ngqo kwindawo yokuphinda usebenzise kwakhona. Uhlalutyo lwefayile Yenziwe ngokusebenzisa ubuchule obuhambele phambili obunemisonto emininzi ukuze basebenzise zonke ii-cores ze-Mac yethu. UPulvinus uhlala ngaphezulu nje kwe-3.6 MB kunye. Ifuna iMacOS 10.12 isebenze ukongeza kwiprosesa engama-64.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Lawula indawo yakho kwihard drive ngendlela eyahlukileyo ngePulvinus
I-Apple ikhupha iBeta yesiBini yoLuntu yeBeta ye-macOS 10.12.5
Ii-headphone ezimbini zebluetooth kunye nesizukulwana sesine i-Apple TV ... hayi okwangoku